Isib: - I-Airbnb
ungathola ulwazi olwengeziwe ezintweni ezilandelayo.
Ikhaya leholide elithi "Casa Franceschi" liyi-villa encane ebukekayo etholakala endaweni nje yokuphonswa kwetshe ukusuka esikhungweni esingokomlando saseVagli Sotto.
Inamakamelo okulala amabili, igumbi lokuphumula, ikhishi, amagumbi okugeza amabili kanye nengadi enkulu kakhulu engaphandle. Engadini kukhona nekhishi elingaphandle elinezoso kanye netafula elinezihlalo kulabo abafisa ukuzama isandla sabo esidlweni sakusihlwa sasehlobo sangaphandle.
Indawo yokupaka yomphakathi itholakala kumamitha ambalwa ukusuka endlini.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho ungazijwayeza imisebenzi eyahlukahlukene njengokuhamba ngezinyawo noma ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni ngenxa yokufinyelela okuseduze ezindleleni eziholela ochungechungeni oluhle lwe-Apuan Alps ezungeze idolobha. Noma ungavakashela izindawo eziningi ezikhangayo ezingafinyelelwa kuVagli Sotto ngesikhathi esifushane, njengeCampocatino, Gramolazzo, Careggine, Isola Santa nabanye abaningi.
Uma, ngakolunye uhlangothi, ufuna ukuchitha iholide eliphumuzayo, ungaya ogwini lweChibi elikhulu laseVagli noma echibini lokubhukuda likaMasipala.
Impela uma ufuna iholide elinokuthula elizungezwe imvelo, ikhaya leholide elithi "asa Franceschi" lingelakho.
Ikhaya leholide elithi "Casa Franceschi" litholakala ezinyathelweni ezimbalwa ukusuka esikhungweni esingokomlando se-Vagli sotto, esingafinyelelwa kalula ngezinyawo. Isikhungo somlando, ngaphezu kokuba simnandi kakhulu ukusivakashela, ngokuqinisekile siyiphuzu eliyinhloko lokuhlanganisa umphakathi.
Ngesikhathi sasehlobo idolobha liza liphila nezivakashi nabavakashi abalenza ligcwale impilo, indawo yokucima ukoma yasemaphandleni igcwale futhi izingane zigijime ezindleleni. Naphezu kwalokhu, imvelo isathule kakhulu futhi iphumule, futhi ukuthula kuhlala kuba ngumsingathi.
Ngingu-Veronica, isivakashi sakho, futhi bengifuna ukukwazisa ukuthi ngizokwamukela mathupha lapho ufika. Ngakho-ke uma unezinkinga lapho ufika noma uma ufuna ukushintsha izinhlelo zakho zokungena, vele ungithinte!
Ngesikhathi sokuhlala kwakho ngizobe ngisesandleni sakho ngokuphelele. Ngihlala eVagli Sotto, ngakho-ke kunoma iyiphi inkinga vele ungithinte ngocingo futhi ngizokufinyelela.
Ngingu-Veronica, isivakashi sakho, futhi bengifuna ukukwazisa ukuthi ngizokwamukela mathupha lapho ufika. Ngakho-ke uma unezinkinga lapho ufika noma uma ufuna ukushintsha izinhlelo…